Yizambane kuphela umhlaludliwa | News24
Yizambane kuphela umhlaludliwa
Cape Town - Sesiqalile sibala amahora ngaphambi kokuthi singene onyakeni omusha.
Kuvamile-ke ukuthi uma kuqala unyaka, abantu babe nezinto abazibekela zona ukuthi kumele kuphele unyaka bezifezile noma bezishintshile ngempilo yabo. Nami ngingomunye wababa nezinhlelo ezithile, kuthi ezinye zazo ziphumelele ezinye kukhathaleke endleleni.
Isifiso sami esikhulu njengoba kuzoqala unyaka, ukuthi kukhuthazeke amantombazane abambe isimilo kuphinde kukhuthazwe namadoda ukuthi adle izithukuthuku zawo, angaphili ngodanki.
Singosisi sengathi singafunda ukugabisa ngoba ishelwa isovozile, bese sibancintsha nje kancane hleze bakhuthazeke obhuti basilobole.
Angisho ukuthi abantu abathengiselwe ingulube isesakeni, ngithi okungenani mzwise kube kanye bese umcikiselela umtshele ayokhokha kuze ezothola njalo ngokuthanda kwakhe.
Mabili mathathu amabhode ekuthi uma ephekiwe angabi nezambane phakathi. Izambane abanye balibiza ngomhlaludliwa noma bathi yinkosi yebhodwe, ngakho belu ukutholaka kwalo kalula.
Ayikho-ke intombazane ekumele ibe yizambane, ibe ngumhlaludliwa, into etholakala kalula nangamanani aphansi. Yebo akhona lawo mantombazane aziphathisa okwamazambane , uthi ikuleli bhodwe qhamu thushu nansi nakuleli.
Kulo nyaka ozoqala kuyisifiso sami ukuthi amantombazane azimisele ngomendo, ancikisele, ashintshe ukwenza, angabi omhlala... njengamazambane.
Ngiyazibuza ukuthi yini engenza indoda ilobole ibe ithola zonke izidingo zomnumzane okhokhile, yona ingakhiphanga nendibilishi? Mhlampe kumele sithi uma sicula iSingle Ladies kaBeyonce, siyicule sibe siqinisile ngalokhu esikushoyo.
Abantu abangagcini ngokuthi bathi simnandi ekugcineni bangenzi lutho ngalokho. Akuthi uma ngimngenise kahle wachazeka, angibambe ngomshado-ke kuze ngingeke ngincikiselele noma ngivale amabhodwe engakaqedi ukudla.